मेरुदण्डको स्याहार- विचार - कान्तिपुर समाचार
असार २६, २०७७ रवीन्द्र बस्नेत
लकडाउनयता हामी अधिकांश समय विद्युतीय उपकरणहरू चलाउँदै घरै बस्न बाध्य छौं, कामका लागि होस् या मनोरञ्जनका लागि । यस्तो गर्दा हामीले शरीरलाई सही आसन (पोस्चर) मा राखेका हुँदैनौं । शारीरिक क्रियाकलाप पनि कम भइरहेको हुन्छ ।घरमा भएका बेला हामीले लामो समय शरीरलाई एउटै आसनमा राख्छौं ।
ल्यापटप, मोबाइललगायत सुतेर अथवा सोफामा ढल्किएर चलाउँछौं जसले गर्दा मांसपेशी दुख्ने समस्या देखा पर्छ । यसरी बसिरहँदा शरीरमा रक्त सञ्चार राम्ररी हुन पाउँदैन र पछि गएर मुटु एवं फोक्सो (कार्डियोपल्मोनरी) मा समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ । राम्रो आसनमा नबस्दा अनेक समस्याले सताउन सक्छ, जसको उपचारभन्दा रोकथाम निकै सहज हुन्छ । लकडाउनका बेला मेरुदण्डमा समस्या पर्न नदिन केही सजिला उपाय यी हुन् :
१. शारीरिक आसनमा सुधार : शरीरलाई राम्रो आसनमा राख्न कार्यस्थान र काममा प्रयोग हुने सामग्रीमा सुधार गर्नुपर्छ । कुर्सी, टेबल सहज हुनुपर्छ । कुर्सी र टेबलबीचको दूरी ख्याल गर्नुपर्छ, ताकि धेरै बेर गर्दन झुकाइरहनु नपरोस् । कुर्सीमा बस्दा कमरपछाडि सिरानी राख्नुपर्छ । खुट्टा धेरै बेर झुन्ड्याइराखे पैताला फुल्न सक्छन् । त्यसैले खुट्टामुनि सानो स्टुल राख्नुपर्छ । बेलाबेला आसन बदल्नुपर्छ ।
२. ओछ्यानको कम प्रयोग : खाली समयमा ओछ्यानमा ढल्किने गर्नाले मांसपेशीहरूमा असर पर्दै जान्छ । लामो समयसम्म ढल्किरहँदा मांसपेशी कडा हुँदै जान्छ । ढाड दुखेका बेला सुत्नुसट्टा घरभित्रै हिँडडुल गरे पीडा घट्दै जान्छ । गर्भवती महिलाले लामो समयसम्म आराम गरिरहँदा मांसपेशी कसिने हुन्छ अनि प्रसवका बेला धेरै कठिनाइ हुन सक्छ ।
३. शरीरलाई फुर्तिलो बनाउने : दैनिक घरायसी कामकाज गरिरहँदा मांसपेशीहरूमा रक्तसञ्चार बढ्छ र शारीरिक–मानसिक समस्याबाट छुटकारा पाइन्छ ।
४. पौष्टिक आहार : लकडाउन लम्बिँदै गरेका कारण खानपानप्रति हाम्रो आकर्षण बढ्दै गएको छ । तर, घरमा पकाइएका भए पनि तेल, मसला वा गुलियो बढी हालेका खानेकुराले शरीरमा बोसो जम्मा भई तौल बढ्दै जान्छ । यसै कारण पछि ढाड दुख्ने समस्या हुन सक्छ । यो बेला शारीरिक क्रियाकलापमा कमी हुने भएकाले खान हुने र नहुने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । फलफूल, सागसब्जी, गेडागुडी, अनाज खान हुनेमा पर्छन् भने चिनी, सोडाजन्य पदार्थ, तारेको तरकारी, मसलायुक्त खाना खान नहुनेमा । पानी पर्याप्त पिउनु अत्यावश्यक छ ।
५. व्यायाम : शरीरलाई लचिलो, फुर्तिलो र बलियो राखिराख्न नियमित व्यायाम जरुरी छ । व्यायाम सधैं मांसपेशीको लचकता र क्षमता बढाउने खाले गर्नुपर्छ । मेरुदण्ड अथवा ढाडको क्षमता र लचकतालाई सधैं कायम राख्नुपर्छ । हाम्रो शरीरको निकै महत्त्वपूर्ण भाग हो यो । तर कोही व्यक्तिमा पहिलेदेखि नै समस्या छ भने विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्शअनुरूपका व्यायामहरू नियमित रूपमा गर्नुपर्छ ।
६. चिसो र तातो सेकाइ : सामान्य रूपमा हामी चिसो अथवा तातोले सेकाइ गर्ने गर्छौं । तर चिसो र तातो के–कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने जान्न आवश्यक छ । यदि मांसपेशी जकडिएको वा दुखेको महसुस भए तातोले सेक्नुपर्छ भने सुन्निएको, मांसपेशीहरूको भित्री चोट, आलो घाउ लगायतमा चिसोले ।
यस्तो सावधानी अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि ढाड, गर्दन वा काँध दुख्ने, हातखुट्टा झमझमाउने वा लुला हुने जस्ता समस्या देखा परे र यसका कारण दैनिक कार्यव्यापारमा अवरोध पुग्न थाले विशेषज्ञ चिकित्सिकसँग यथाशीघ्र सम्पर्क गर्नुपर्छ । दैनिक जीवन प्रभावकारी बनाउन शरीरको हरेक भागको मांसपेशी र मेरुदण्डको राम्रो स्याहार गर्नुपर्छ, जुन राम्रो आसन, व्यायाम र खानपानबाट सजिलै सम्भव हुने गर्छ ।
(बस्नेत ह्याम्स अस्पतालको फिजियोथेरापी विभाग प्रमुख हुन् ।)
प्रकाशित : असार २६, २०७७ १०:२२
प्रधानमन्त्री ओलीले पद छाडे अस्थिरता निम्तिन्छ : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ — नेकपामा आन्तिरक विवाद चुलिएपछि गत साता केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले भेला गरे । भेलाले पार्टीको एकता टुट्न नदिने निर्णय गर्‍यो र सबै नेतालाई ध्यानाकर्षण गरायो । यो समूहका एक नेता थिए, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानी :
प्रधानमन्त्री किन राजीनामा दिन चाहनु हुन्न ?
अहिले कोभिड–१९ को संकट छ । राष्ट्रियताको बहस छ । यस्तो बेला अस्थिरता निम्त्याउने होइन । विगतमा दुइटा पार्टी एक हँुदा जुन समझदारी बनेको छ, त्यही समझदारी लिएर जानुपर्छ । सरकारको स्थायित्वका लागि नै पार्टी एकता भएको हो । को व्यक्ति प्रधानमत्री बन्ने वा नबनाउने भन्ने कुरा होइन । अस्थिर सरकार भयो, अल्पमतको सरकार भयो, त्यसले मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सकेन भन्ने आधारमा यो एकता अघि बढेको हो । अल्पमतको सरकारले मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सकेन भनेकाले नै एकता भयो । स्थायी सरकारलाई किन हटाउने ? विभिन्न कारणले देशलाई विभाजन गर्ने ? केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुनै कारण छैन ।
सरकारले काम गर्न सकेन, प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग समन्वय गर्नुभएन भन्ने छ नि त ?
सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको छ । तर पार्टीले चाहिँ त्योअनुसारको गतिविधि गरेन । सरकारले काम गरेको छैन भन्ने कुरा पार्टीले केही गतिविधि नगरेकाले बाहिर नदेखिएको हो । विकास निर्माणका, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, राष्ट्रियतासँग गाँसिएका काम गरिरहेको छ । यस्तो बेला सरकार परिवर्तनको कुरा सामान्य नागरिकले त उठाउँदैनन् । तर यहाँ संकटका बेला नेतृत्व गर्नुपर्ने नेता नै फुट र विभाजनमा लाग्नुभएको छ ।
पार्टीले निर्णय गरेर हटायो भने के हुन्छ ?
दुइटा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको कुरा मात्र वैधानिक हुन्छ भन्ने विधानमा छ । पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवारीबाट हट्दाखेरि एकता नै भंग हुन्छ । त्यसैले अहिले जिम्मेवारीबाट हटाउनेभन्दा महाधिवेशन छिटो गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अहिले गणितीय हिसाबले तलमाथि पार्न सकिएला तर यसले दूरगामी असर पर्छ ।
प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एउटा छाड्दा समस्या समाधान हुँदैन त ?
दुइटा पद छाड्ने भन्ने विषय नै होइन । संकटका बेला प्रधानमन्त्रीले छाड्दा के सन्देश जान्छ ? अक्षम, अयोग्य भएर छाडेको र भारतका कारण प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो भन्ने सन्देश जान्छ । यसले राष्ट्रियतामा दूरगामी असर पार्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद अहिले छाड्न सम्भव छैन । पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका परिभाषित गरेर जान सकिन्छ । अहिले जे जस्तो अभ्यास भएको छ, अस्थिरता निम्त्याउनलाई भएको छ । देशी–विदेशी शक्तिलाई क्रीडा भूमि बनाउन सहयोगी बनिरहेका छौं । यो बेला प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छाड्ने भनेको अस्थिरता निम्त्याउन हो । उहाँमा कमजोरी छन् भने सच्याएर, कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ ।
संसदीय दलमा यो विषय छलफल गरेर विधिपूर्वक टुंग्याउन सकिँदैन ?
स्थायी कमिटीमै राजीनामा दिन हुन्न भन्ने पक्षका नेताले बोल्नै पाएका छैनन् । एक पक्षले बोलेकै आधारमा त राजीनामा दिने होइन होला । त्यसैले अहिले नै संसदीय दलको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हुँदैन होला नि ।
प्रकाशित : असार २६, २०७७ १०:२०